အောင်ထွန်းဦး: ကျွန်တော်နဲ့ ကောင်မလေး သရဲ
"ဒီမှာ ညအိပ်ပေးပါလား သားရယ်..၊ အန်တီတို့က နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့.."
"ရပါတယ် အန်တီရယ်…. စိတ်မပူပါနဲ့… ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံး ညလုံးပေါက် ရှိမှာပါ…" ဆိုပြီး ကျွန်တော် အားပေးနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်..။
"သြော်..အန်တီရယ်.. အန်တီက ငိုထားလွန်းလို့ မျက်လုံးမို့ပြီး ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်တာပါ…" ဆိုပြီး နှစ်သိမ့်ပြီး အိမ်ထဲ ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်..။
ပြီးတော့ "သမီး… လာ….လာ…. အိမ်ထဲဝင်… "
ခဏကြာတော့ အန်တီက.. "သမီး.. ဘယ်သွားမလို့လဲ.." ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်..။ ကြမ်းခင်း တကျွီကျွီ မြည်သံကို ကြားလိုက်ရပြန်တယ်.. ကျွန်တော်ပျော်သွားတယ်.. ဟုတ်တယ်လေ.. သူ့ဟာသူ သွားချင်တဲ့နေရာသွား ကျွန်တော့်နား ရှိမနေရင် ပြီးရောလေ..။
"သမီး…ဘာလုပ်မလို့လဲ… အဲ့လို မလုပ်ရဘူးလေ..သမီး..အဲ့ဒါ သမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းလေ.." အန်တီက ထိတ်လန့်စွာနဲ့ အော်ပြောလိုက်တယ်..။
"သမီး.. အဲ့လို မလုပ်နဲ့လို့ အမေ..ပြောနေတယ်နော်…အမေ့စကားနားထောင်စမ်း.."
"ဟုတ်တယ် ဟရောင်.. ကောင်မလေးက မင်းကိုဝင်ပူးပြီး ငါတို့လေးယောက်ကို တံမြက်စည်း ဆွဲပြီး လိုက်ရိုက်တာဟေ့… ပြေးလိုက်ရတာကို မပြောနဲ့တော့..။ နောက်ပြီး မင်းပါးစပ်ကလည်း ပြောသေးတယ်…. သေနာကောင်တွေ… ငါ့ကို စချင်အုံးတဲ့.."
ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်း ကောင်မလေးအိမ်ကို မသွားဖြစ်ခဲ့ပါ..။ မသွားရဲတာကြောင့်လည်းပါသည်။ ရက်လည် တဲ့ရက်အထိ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေး ပြီးသွားတယ်လို့ ကြားရတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ကယ်ပဲ ကောင်မလေး အတွက် ၀မ်းသာမိသည်…။ ငါတို့ ချစ်တဲ့ကောင်မလေးရေ…မင်းလေး ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေကွာ…။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:50 AM